विज्ञको सुझाव- वृद्धवृद्धालाई घरभित्रै राख्नुस्
यसका लागि बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म जुनसुकै बेला टोल फ्रि नम्बर १६६००१०२००५ मा फोन गरेर परामर्श लिन सकिने डा. गौतमले बताए। रिदम न्युरो साइक्याट्री अस्पतालका मनोचिकित्सक डा. रितेश थापाले बिहान साढे ७ देखि ९ बजेसम्म ९८१४२६७२४२ मा फोन गरेर मनोपरामर्श गर्न सकिने जानकारी दिए। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली